के यो दार्जीलिङका मानिसहरूलाई खुल्ला धम्की होइन? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारके यो दार्जीलिङका मानिसहरूलाई खुल्ला धम्की होइन?
के यो दार्जीलिङका मानिसहरूलाई खुल्ला धम्की होइन?
April 7, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
दार्जीलिङका आयुन्त राज श्रेष्ठको नाममा फेसबुक चलाउने एक सज्जनले जति नै उफ्रे पनि बिमलको बदमास केटाहरू सबैले साथ छोडिसकेको बताएका छन्। दिउँसै पुलिस काट्ने केटाहरू आलोककान्तसँग रहेको दावी गर्दै उनले मनिस्वर, बोतल खाने, स्वर्निम र प्रनिलहरूको नाम उल्लेख गरेका छन्। के यो दार्जीलिङको मानिसहरूलाई खुल्ला धम्की होइन। के उनीहरू जनतालाई त्रासमा राखेर मत खसाल्न लगाउँन चाहन्छन्?
वर्त्तमान पहाडको सांसद भोट निक्कै रोचक देखिँदैछ। एकातिर ९ वटा दल र संस्थाहरूको भरमा भाजपाका राजु विष्ट छन् भने अर्को तर्फ विनय समूह र तृणमूलका अमरसिंह राई मैदानमा छन्। निर्दलीय उम्मेदवार स्वराज थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि कसलाई सघाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। यता डा. हर्कबहादुर छेत्री पनि प्रत्यासी छन भने ऋषिका छेत्री र अजय दाहाल पनि सांसद पदको दावीमा ओर्लिएका छन्। समतलबाट पनि शङ्कर मालाकर र समन पाठकहरू दल बचाउने होडमा लागिरहेका छन्।
पहाडमा अहिलेसम्म पनि गणतान्त्रिक परिवेश तयार भइनसकेको अवस्था विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण पहाडले गणतन्त्रको पुनर्वहालीको माग गर्नु पर्नेमा तैं छाड र मैं छाड गरेर करिब दुई दर्जन व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनु पनि आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रह्यो। सभाको अनुमति अनलाइन लिन सकिने भएता पनि अनुमति दिने निकायभने राज्यकै रहेकोले कतै न कतै कोल्टे भएको हामीले देखिरहेका छौं।
यता चुनाउ आयोगले चुनाउ आचारसंहिता लागू गरिसकेको भए तापनि पहाडमा यो प्रभावकारी ढङ्गमा लागू भएको छैन। मतदाताहरूलाई पुलिस र प्रशासन लगाएर पेल्ने काम यथावत छ। यति बेला चुनाउको मेला लागेर रङ्गी चङ्गी हुने पहाड एक दललाई मात्र खुल्ला छोडेर उराठलाग्दो छ। आज पनि एकदल छोडेर आफूलाई मन परेको दलको सभामा जान डराइरहेछन् पहाडका जनता। यस्तोमा राज्यको चुनाउ आयोगले पनि कालो चश्मा लगाएर निदाएको बहाना गरिरहेको छ।
नियमानुसार, जीटीएका बीओएहरू विनय तामाङ, अनित थापा, सञ्चवीर सुब्बा र छिरिङ दाहालहरू बङ्गाल सरकारका कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरू कुनै चुनाउ जितेर गएका प्रतिनिधि नभएर सरकारको तलब महिनावारी खान्छन्। यस्तोमा उनीहरूले चुनाउ प्रचारमा जान नपाउँनु पर्ने हो। उनीहरू चुनाउ प्रचारमा निस्किएकोमा आपत्ती जनाउँदै मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाउ आयोगमा नालिस गरिसकेको छ। यद्धपि, आयोगको कुनै जवाब छैन।
अर्कोतिर प्रिसाइडिङ अफिसर र फर्स्ट पुलिङ अफिसर भइसकेकाहरू र चुनाउमा खटिएका शिक्षकहरूको सङ्गठनले तृणमूल प्रार्थी अमरसिंह राईलाई खुल्लम खुल्ला समर्थन जनाएका छन्। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनले समर्थन जनाए पनि चुनाउमा खटिएका शिक्षकहरूले भने यस्तो सभामा जानु नियम विपरित हुन्छ र उनीहरू खटिएको बुथहरूमा जनतालाई अवश्यनै प्रभाव पार्नेछन् भन्ने कुरामा शङ्का रहँदैन। चुनाउ आयोगद्वारा यसको निष्पक्ष जाँच होस्।
सोही क्रममा दार्जीलिङका आयुन्त राज श्रेष्ठको नाममा फेसबुक चलाउने एक सज्जनले जति नै उफ्रे पनि बिमलको बदमास केटाहरू सबैले साथ छोडिसकेको बताएका छन्। दिउँसै पुलिस काट्ने केटाहरू आलोककान्तसँग रहेको दावी गर्दै उनले मनिस्वर, बोतल खाने, स्वर्निम र प्रनिलहरूको नाम उल्लेख गरेका छन्। के यो दार्जीलिङको मानिसहरूलाई खुल्ला धम्की होइन। के उनीहरू जनतालाई त्रासमा राखेर मत खसाल्न लगाउँन चाहन्छन्?
हामी चाहान्छौं पहाडमा चुनाउ निष्पक्ष होस्। पहाडको प्रत्येक मतदाताले स्वेच्छाले मतदान गरून्। यसको निम्ति चुनाउलाई प्रभाव पार्ने आचार संहिता विरूद्ध भइरहेको प्रत्येक कामका चुनाउ आयोगले जाँच गरोस्। जनता आतङ्कित बनेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भने यो भन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक हकको हनन् अर्को हुनेछैन। देशको गणतान्त्रिक सुन्दरतालाई नष्ट गर्ने यस्ता तत्वहरूमाथि चुनाउ आयोगको कडा नजर रहनु पर्छ र आवश्यकता परे कानुनी कार्वाही समेत गरिनुपर्छ। चुनाउ आयोगको ध्यान यतातिर जाउन् भनेर यति लेखिरहेको छु।
के पहाडमा हुन्छ त निष्पक्ष चुनाउ? : समतलमा उठ्यो आवाज : पहाड मौन